I-Sharpspring: Ipulatifomu Yokuthengisa Nokumaketha Ephelele futhi Engabizi | Martech Zone
I-Sharpspring: Ipulatifomu Yezokuthengisa Nokumaketha Ephelele futhi Engabizi
NgoLwesibili, Septhemba 22, 2020 NgoLwesibili, Septhemba 22, 2020 Douglas Karr
SharpSpring ihlanganisa ukumaketha okuzenzakalelayo ne-CRM kusisombululo esisodwa sokuphela kokugcina esenzelwe ukukhulisa ibhizinisi lakho. Ipulatifomu yabo ecebile ngesici inakho konke okudingayo nokuningi kokuthengisa kwangaphakathi nokuthengisa okuzenzakalelayo: i-imeyili esekwe ekuziphatheni, ukulandelela umkhankaso, amakhasi okufika ashukumisayo, umakhi webhulogi, ukuhlela imithombo yezokuxhumana, izingxoxo ezihlakaniphile, i-CRM nokuthengisa okuzenzakalelayo, umakhi wefomu onamandla, ukubika nezibalo, i-ID yezivakashi engaziwa, nokuningi.
Ipulatifomu isetshenziswa ngama-SMB nezinkampani ze-Enterprise, kepha amakhasimende aphambili eSharpSpring angama-ejensi edijithali ngoba anikela ngohlelo lokuthengisa kabusha / olumhlophe oluye lwaba yisikhungo senzuzo kuma-ejensi edijithali angaphezu kwe-1,200 emhlabeni jikelele. Banikela ngezici ezimbalwa ze-ejensi, kufaka phakathi isikhombimsebenzisi esibonakalayo, ukuphathwa kwamakhasimende amaningi, ukungena ngemvume okukodwa, nokuningi.
Sisebenzise i-Act-On ne-HubSpot ngaphambi kokuhamba ne-SharpSpring. Amanye amapulatifomu amabili mahle, kepha iSharpSpring isivumele ukuthi silawule kakhudlwana amaklayenti ethu ngokusebenzisana, ukukhokhisa, kanye nokuklama kwepulani.
URaymond Cobb III, iJB Media Group
Izici ze-SharpSpring Faka
imeyili - Qeda ukuqhuma kwe-imeyili okuyisidina, nokugcina isikhathi kucebo lakho lokumaketha. Qala izingxoxo eziholela ekuguqulweni ngemilayezo eyenziwe yaba ngeyakho nemikhankaso ezenzakalelayo ephendula ekuziphatheni komsebenzisi. Sebenzisa iplatifomu yokumaketha nge-imeyili ye-SharpSpring ukulandela umkhondo “ngemuva kokuchofoza.” Ngokungafani nabanye abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili, sinikeza ama-analytics anemininingwane kukho konke ukuxhumana - ukuze ukwazi ukuthumela umlayezo ofanele ngesikhathi esifanele, futhi uthumele iqembu lakho lokuthengisa lisebenze ngezaziso zesikhathi sangempela.
Amafomu - Yakha, yenza ngezifiso, futhi uhlele kabusha izinkambu ngokuzikhandla ngesihleli esihle sokudonsa nokudonsa. Amafomu wethu ashukumisayo aqedela izinkambu zabavakashi abaziwayo ukuthuthukisa ukuguqulwa futhi kubukeke kukuhle kunoma yiliphi isayithi eline-CSS yangokwezifiso. Ungakwazi ngisho nokwenza imephu yezinkambu ezivela kumafomu enkampani yangaphandle neyomdabu.
Ukuzenzekelayo - Isakhi sethu sokuhamba komsebenzi esibonakalayo esinamandla, esisebenziseka kalula senza lula ukukhangisa okuzenzakalelayo. Sebenzisa i-logic logic ukubandakanya ukuhola ezindaweni ezibucayi ohambweni lwabo lokuthenga olwehlukile. Ngokushesha vumelanisa imininingwane ne-automation CRM suite yethu ezenzakalelayo yokumaketha. Setha ama-personas womthengi wemikhiqizo nezinsizakalo zakho, bese unikeza okuholela kuma-personas ahlukile ukuze ukwazi ukuthumela imilayezo eqondiswe ngokuzenzakalela. Thola uhlu lomhlahlandlela oshisayo wosuku ngalunye ngqo ebhokisini lakho lokungenayo, bese wenza ngesikhathi esifanele ukuwaguqula abe ukuthengisa. Sebenzisa amathuluzi wokuzenzekelayo wokumaketha we-SharpSpring ukushaya umkhondo ngokususelwa ekuzibandakanyeni, ekulandeleni ikhasi, ukulingana, nokuningi - zize zibangele ukubola kokuhola kwemvelo ngokuhamba kwesikhathi.
Umazisi Wabavakashi - I-VisitorID ingesinye sezikhali eziyimfihlo esinqwabeni sethu samathuluzi wokuzenzekelayo wokumaketha. Yisebenzise ukuthola izivakashi eziphindwe kabili kunesiza sakho (uma kuqhathaniswa nezinkundla zokumaketha ezincintisanayo). Sebenzisa ukulandelela okususelwa ekuziphatheni ukuze uqonde ngokweqiniso ukuthi yini okukhuthaza ukuchofoza ngakunye. Khomba amaphuzu obuhlungu namasu aphumelelayo ukuze iwebhusayithi yakho ingalokothi isebenze kahle. Thola uhlu lomhlahlandlela oshisayo wosuku ngqo ebhokisini lakho lokungenayo, bese wenza ngesikhathi esifanele ukuguqula lokho kuholele ekuthengiseni.
CRM - Ulwazi lungamandla - futhi i-CRM iyathengiswa. Sebenzisa i-CRM yethu yokumaketha noma uhlanganise umhlinzeki wakho we-CRM owuthandayo ngeplatifomu yezentengiso ye-SharpSpring. Gcina idatha ehlanganisiwe ishesha ngokusetshenziswa kokuvumelanisa okuyizindlela ezimbili. Landelela amathuba kusuka ekudalweni ukuze uvale ngombono wenyoni wepayipi lakho. Dala izigaba zokuthengiselana ngokwezifiso, izinkambu, izihlungi, nokuningi, ukuphatha ukuthengisa ngamandla ngamathuluzi wethu wokuzenzakalela wokumaketha.
Amakhasi okufika - Yakha amakhasi anamandla okufika nemisele yamakhasi okufika aguqula izivakashi zibe imikhondo. Sebenzisa i-point-and-click editor yethu elula ukudala amakhasi ahlukile okufika, noma uguqule isifanekiso esivela kumtapo wethu wezincwadi omkhulu. Setha amaketanga wamakhasi okufika axhunyiwe ukuhlela izivakashi zibe yimingcele ehlukile. Shayela ukuguqulwa okuningi ngokuqukethwe okunamandla kwewebhu okuguqukayo ngokuya ngokuthakaselayo kwezivakashi nezimfanelo. Diliva imiphumela ngokushesha ngaphandle kokufaka amakhodi noma unjiniyela, futhi ngaphandle kokuthinta iwebhusayithi yakho - kepha kulabo abafuna ukulawula okuphelele, ungangeza eyakho ikhodi ye-HTML ne-CSS ukwenza ngezifiso amakhasi akho ngokuqhubekayo.
Blogs - Qalisa ibhulogi ngemizuzu nomakhi webhulogi nomhleli kuhlelo lwethu lokuzenzekelayo lokumaketha. Yakha, phatha futhi ushicilele okuthunyelwe kalula. Setha ukusebenzisana ngaphakathi kwethimba lakho, noma dala amaphrofayli ukwamukela ama-blogger wezivakashi. Nweba ukufinyelela kokuqukethwe kwakho nge-imeyili ye-RSS syndication ethumela ngokuzenzakalela okuthunyelwe okusha kuhlu lwakho lwamakheli. Thola ukufinyelela okuningi kokuqukethwe kwakho ngamawijethi wezokuxhumana avumela abasebenzisi ukuthi babelane futhi bakulandele ku-inthanethi. Sebenzisa amathuluzi wokuzenzakalela wokumaketha we-SharpSpring ukulandelela izivakashi, thola ukuthi yikuphi okuqukethwe okusebenza kahle kakhulu, futhi ukhombe okuthunyelwe ukukhulisa ukuguqulwa.
I-Marketing Analytics - Yenza izinqumo ezibalulekile ngemininingwane enembile futhi efanele. Khetha amamethrikhi abaluleke kakhulu emkhankasweni ngamunye nasemlayezweni ngamunye, bese wenza imibiko yangokwezifiso yokubuyekeza ukusebenza kwakho. Qonda ukuphela kokuphela kokugcina futhi ulandele imithombo yokuhola - noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Yabelana ngolwazi olusemqoka nethimba lakho, amaklayenti, namakhasimende kusibonisi esifundekayo nesifinyelelekayo.
Ukuhlanganiswa - Xhuma kumakhulu abahlinzeki be-software abavela eceleni ngama-SharpSpring's APIs kanye nokuhlanganiswa kweZapier. Vumelanisa idatha nezinhlelo zakho zokumaketha ezenzekelayo ze-CRM, gcina izinhlelo zakho zokuphathwa kokuqukethwe zibuyekeziwe, futhi uhlanganise amafomu ewebhu nawomuntu wesithathu nenkundla yethu yokumaketha. Ngempela yenza iSharpSpring ibe ngeyakho ngokuqamba kabusha ama-imeyili, izaziso, imibiko, kanye nohlelo lokusebenza uqobo. Gcina idatha kupulatifomu yethu ebetheliwe, evikelekile, nekahlukanisekayo.
Imithombo Yezokuxhumana - Iya ngaphezu kokushicilela, ukuhlela, nokuqapha. Shintsha ukuxhumana kwezenhlalo kube izingxoxo ezinengqondo ezikhiqiza ukuthengisa futhi zivele emibikweni yakho yokumaketha. ISharpSpring Social inikela ngazo zonke izici ozilindeleyo kusixazululo sokuphathwa kwezenhlalo, kanye namathuluzi wokuguqula anamandla ongawathola kuphela kunkundla yezentengiso ehlanganiswe ngokuphelele. Qalisa ukugeleza kokusebenza okuzenzakalelayo bese uthola ukuhola komphakathi ngokuya ngokusebenzisana, imithombo, izintshisekelo nokuningi. Linganisa i-ROI yokuphela kokuphela yemikhankaso edidiyelwe yokukhangisa bese ukhombisa ukubaluleka kwemizamo yakho yezokuxhumana.
Thola i-Demo ye-SharpSpring
Ukudalula: Singabantu abaxhumene ne- SharpSpring futhi basebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo ngaphakathi kwalesi sihloko.
Tags: Apiipulatifomu yebhulogiukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeimeyili Marketingamafomuezokuhlaziyaukuzenzekelayo kokuzenzekelayoplatform yokumaketha yokuzenzekelayoisibabalosharpspring kwezenhlaloplatform platform mediaUmazisi wesivakashi
I-New Domain Regular Expression (Regex) Iqondisa kabusha ku-WordPress